तपाईंको स्मार्टफोन कतै असुरक्षित त छैन ? - Tech News Nepal Tech News Nepal
तपाईंको स्मार्टफोन कतै असुरक्षित त छैन ?
काठमाडौं । पछिल्लो समय मोबाइल सबैका लागि अपरिहार्य नै भएको छ । हाम्रा हरेक कुरा मोबाइलसँग जोडिएका छन् । हामीले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जाल त्यसैमा चलिरहेको हुन्छ । त्यसैबाट बैंकिङ कारोबार र अनलाइन शपिङ गरिरहेका हुन्छाैं ।
माेबाइलकाे बढ्दाे प्रयाेगसँगै यसमा तपाईंले धेरै महत्वपूर्ण फाइल र डेटा राख्नुहुन्छ, जुन गुमाउँदा तपाईंले आफ्नो जीवनमा ठूलो समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ ।
कल्पना गर्नुहाेस् त, तपाईंकाे मोबाइल कसैले चोर्‍यो । मोबाइलमा तपाईंले कुनै लक राख्नुभएको थिएन । चोरी गर्ने व्यक्तिले सहजै त्यसबाट बैंक खाताको पहुँच, तपाईंको विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा पहुँच राख्यो भने भने के हाेला ?
पक्कै पनि तपाईंले कमाएको धनमात्रै नभएर तपाईंको सामाजिक प्रतिष्ठामा समेत आँच आउन सक्ने गरी उसले तपाईंको डेटा दुरुपयोग गर्न सक्छ ।
मोबाइल चोरी नभएको अवस्थामा पनि अहिले विश्वमा साइबर सुरक्षाको जाेखिम फैलिरहेकाे छ । यस्तोमा तपाईंको मोबाइलमा ह्याकरले पहुँच बनाएर पनि तपाईंका महत्वपूर्ण फाइल तथा बैंकमा पहुँच राख्न सक्छ । त्यसका लागि पनि हामीले बोक्ने मोबाइललाई सुरक्षित राख्नु अबको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कदम हो ।
त्यसैले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि आफूले बोक्ने मोबाइल कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने विषयमा जानकारी दिएको छ । उक्त जानकारीका आधारमा यहाँ हामी तपाईंहरुलाई मोबाइल सुरक्षित राख्न केही उपाएको बारेमा जानकारी दिँदैछौं ।
गुगल प्ले स्टोर वा एप स्टोर (Official Reputed App Store) बाट Rating तथा Review को आधारमा मात्रै App Download गरी install गर्ने गरौं।
App Install गर्दा App ले Camera Access/Location Tracking/Contacts/Media/Audio/File Access को Permission माग गरेमा Deny गरौं ।
मोबाईललाई बलियो पासवर्ड (Password) तथा डिजिटल औठाछाप जस्ता Bio-metric Log In प्रयोग गरी सुरक्षित राखौं | पासवर्ड (Password) समय समयमा परिवर्तन गरौं ।
स्मार्टफोनलाई Jailbreak/root गरी प्रयोग नगरौं । भेटिएको स्मार्ट फोनको प्रयोग नगरी नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा बुझाऔं ।
प्रयोग नभएको बेला मोबाइल ह्याण्डसेटलाई Lock गरेर राखौ | साथै Idle अवस्थामा Auto-Lock हुने गरी । फोनको Settings मा Configure गरौं ।
मोबाइल फोनको सफ्टवेयर (Operating System / Applications) लाई नियमित रुपमा अद्यावधिक गरौं । साथै मोबाइल फोनको सुरक्षाको लागि अनिवार्य रुपमा Genuine Firewall/Anti Virus / Mobile Security Solutions को प्रयोग गरौं ।
प्रयोग नहुने बेला मोबाइल फोनको WiFi, Bluetooth, Mobile Data, GPS आदिलाई बन्द (OFF) गरी राखौं।
अरुले मोबाइल फोनको प्रयोग गर्न नसक्ने गरी मोबाइल ट्र्याकिंग हुन सक्ने गरी, Completely Wipe out गर्न सक्ने गरी तथा सिमकार्ड परिवर्तन गरेमा कुनै निश्चित नम्बरमा Alert आउने गरी Configure गरौं । यस्ता settings ले मोबाइल हराएमा भेट्टाउन सहयोग पु-याउँछ र मोबाइलमा भएका व्यक्तिगत विवरणहरु अरुको पहुँच पुग्नबाट बचाउँछ ।
मोबाइल मार्फत डिजिटल कारोबार गर्दा असुरक्षित Free Public Wi-Fi/Hotspot को प्रयोग नगरौं।
मोबाइल ह्याण्डसेटमा हुने संवेदनशील डाटाको Backup राखौं । साथै मोबाइलमा समेत उक्त संवेदनशील डाटालाई encryption गरेर राखौं ।
मोबाइल ह्याण्डसेटबाट अनलाइन तथा मोबाइल बैंकिङ्ग सेवा उपभोग गर्न मोबाइल डाटा/Secure Wifi प्रयोग गरौं । साथै Multi-factor Authentication जस्तै Two Factor Authentication, Mobile Number, OTP, Fingerprint इत्यादि ) को प्रयोग गरौं ।
अपरिचित मोबाइल नम्बर / इमेल / Whats App/Viber/Messenger आदिबाट आएको सन्देश, फोनकल लगायतलाई Reply/Response नगरौं ।
Freeware, Pirated software / game, Free music/video, अश्लील सामग्री उपलब्ध हुने जस्ता असुरक्षित वेभसाइटहरुको प्रयोग नगरौं, Pop-up link मा जथाभावी Click नगरौ र Freeware/shareware तथा Pirated Software, Music/Video/games डाउनलोड नगरौं ।
मोबाइल फोनलाई अरुको सजिलै पहुँच पुग्ने गरी यतिकै नछोडौं ।